Jude Jude လုပ်ငန်းစုကနေ အတိုးနှုန်း မြင့်မားစွာပေးပြီး အစုစပ် ခေါ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ဒီ Post မှာ ဆွေးနွေးဖို့ အချက်အလက် စုဆောင်းပေးထားဖို့ပါ ။ ~ Myanmar Anti Mlm Group
Jude Jude လုပ်ငန်းစုကနေ အတိုးနှုန်း မြင့်မားစွာပေးပြီး အစုစပ် ခေါ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ဒီ Post မှာ ဆွေးနွေးဖို့ အချက်အလက် စုဆောင်းပေးထားဖို့ပါ ။
Jude Jude လုပ်ငန်းစုကနေ
အစုစပ် ခေါ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့
ဒီ Post မှာ ဆွေးနွေးဖို့
အချက်အလက် စုဆောင်းပေးထားဖို့ပါ ။
၅ သိန်းကနေ သိန်း ၄၀ အထိကို ၃၀% အတိုး
၄၁ သိန်း ကနေ ၉၉ သိန်းကို ၂၅% အတိုး
သိန်း ၁၀၀ နဲ့ အထက်ကို ၂၀% အတိုးပေးပြီး
အစုစပ် ခေါ်နေတာပါ ။
တခြား Posts တွေက ဆွေးနွေးမှု များလာရင်
ပျက်သွားတာ သတိထားမိလို့ ပါ ။
ရှေ့မှာ ရင်းနှီး ငွေ ထည့်ပြီးသား လူတွေ အတွက်
သတိထား စရာ အချက်လေးတွေကို
ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။
( ကာယကံ ရှင် Chatbox မှာ လာပြောထားတာတွေကိုပါ
Screenshots တင်ပေးထားပါတယ် )
ဆွေးနွေးမှုဟာ PA မဆန်ဖို့
မရိုင်းပြမိစေဖို့ သတိလေး ထားပေးစေချင်ပါတယ် ။
ချက်ချင်း ထုတ်ပါမယ် ။
သူရိုင်းလို့ ကိုယ်တွေပါ စိတ်တိုပြီး ပြန်ရိုင်းနေရတာ
ကိုယ့် စကားကို တာဝန်ယူပြီး
အေးအေးဆေးဆေး သေချာ ဆွေးနွေး ကြဖို့
👉 ဒီ Post က MLM နဲ့ မဆိုင်ပဲ ဘာလို့ တင်တာလဲ 👈
ကျွန်တော်တို့ AntiMLM လုပ်တယ်ဆိုတာ
MLM ကြောင့် လူ အများ နစ်နာနေမှုတွေကို
ရသလောက် အတတ်နိုင်ဆုံး တားဆီး လျှော့ချနိုင်ဖို့ပါ ။
ဒီတော့ MLM မဟုတ်ပေမယ့်
တခြား အလားတူ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများလွန်းတဲ့ /
သံသယ ဖြစ်ဖွယ် ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အကြောင်းကိုလည်း
တတ်နိုင်သလောက် ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ် ။
Gold /Forex Trading တွေက အစ
PTC / Online investment scams အပါအဝင်
Ponzi / Pyramid Schemes တွေ အပါအဝင်ပေါ့ ။
ဒါကြောင့် ဒီ လုပ်ငန်းစု အကြောင်းကိုလည်း
Post တင် ဆွေးနွေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
SCL လို မျိုး
ဧရာရွှေမြေ တို့လိုမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ချေ ရှိတယ်လို့
ယူဆရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆွေးနွေးပေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လုပ်ငန်း ရဲ့ တကယ့် အမြတ်ကနေ
အတိုး ပြန်ပေးနေတာ မဟုတ်ပဲ
နောက် ဝင်လာတဲ့ လူသစ်တွေရဲ့ ရင်းနှီးငွေတွေကနေ
ရှေ့လူတွေကို ဖဲ့ဖဲ့ပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို
Ponzi Scheme လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
နောက်ထပ် လူသစ်တွေ ဝင်လာနေသ၍
ဒီ လုပ်ငန်းတွေဟာ အတိုး နှုန်းကို
မှန်မှန်ပေးနိုင်ပြီး လည်ပတ်နေလေ့ရှိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် လူသစ်တွေက
အချိန် ၆လ-၁နှစ် အတွင်းမှာတင်
လုပ်ငန်း စတင် အခက်အခဲ ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ် ။
ဒီ့ထက် ပို ကြာလာရင်တော့
လုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး ပြိုလဲပြီး
ငွေရင်း ထည့်ထားသူ အများစု
ဆုံးရှုံးမှု ကြုံရတတ်ပါတယ် ။
( လုပ်ငန်း တည်ထောင်သူနဲ့
စောစောကတည်းက ငွေ ထည့်ထားပြီး
အမြတ် ထွက်တာပေါ့ဗျာ )
ဒါကြောင့် Ponzi scheme တွေကို
အခု သတင်း ကြားနေရတာက
Lily Lily ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်
အဆက်အသွယ် လုပ်လို့တောင် မရတော့ဘူးလို့
အထူး သတိထားကြပါဗျာ 🤔
🔺 ကို Michael ဆွေးနွေးချက် 🔺
ခု တစ်လကို ၃၀% ပေးနေတယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာလေးတွေ
ပထမဆုံးအချက် ကတော့ အရှင်းဆုံးပဲ။ ဘယ်လုပ်ငန်းမှာ တစ်လ ကို ၃၀ရာခိုင်နှုန်း မပေးနိုင်ဘူး။ ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေနဲ့ မညီတာ တစ်ခုခု လုပ်နေလို့ပဲ။တရားဥပဒေနဲ့ မညီဘူးဆိုတာ အခွန်ရှောင်တာ က စပြီး အကုန်ပါတယ်။
ဒုတိယ အချက် ချပြထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဟာ Liquify မဖြစ်ဘူး။ ဆိုလို တာက ငွေ ပြန်ဖြစ်လွယ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာ ကတစ်လကို ၃၀% ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခု ဟာ Working Capital ကို Efficient and Effectively သုံးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်း ဖြစ်ရမယ်။ Gems လိုမျိုး လို ပစ္စည်းရင်းထား ငွေမြုပ်တဲ့ လုပ်ငန်း တွေ ဟာ အဆင်မပြေဘူး လူတိုင်း ကနေ့တိုင်း စိန်ဝယ်နေတာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒါကို သိဖို့လိုတယ်။ Business Line အရ ကို မဖြစ်နိုင်တာ။
တတိယ အချက် စာချုပ်တွေ ကို ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်မထိုး ပဲ အသင့် ထိုးထားတဲ့ စာချုပ်တွေမှာ ချုပ်နေတယ်လို့ ပြန်ကြာားတယ်။ အဲဒါဟာ ပဋိဥာည်ဥပဒေအရ အဆင်မပြေဆုံးအချက်ပဲ။ တကယ်လို့ ပြသနာ တစ်ခုခု တက်ရင် စာချုပ်မှာ ထိုးထားတဲ့ လက်မှတ်က တစ်ဖက်လူက ထိုးမထားပါဘူးဆိုဘယ်လို လုပ်မလဲ။ နောက် စာချုပ်ပါအချက်အလက်တွေ ကို သဘောတူကြောင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မထိုးရင် အဆင်မပြေဘူး။
နောက် ဆုံးတစ်ချက် ကတော့ ထပ်ထည့်ခိုင်းနေတာ။ပြန်ထုတ်လို့ ခွဲပြီး ပြန်ထုတ်ပေးနေရတဲ့ တိတိကျကျ ပြောရရင် Working Capital Jamm ဖြစ်နေလို့ ပြန်မထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခု ဟာ ထပ်ပြီးထည့်ခိုင်းနေသေးတယ် ဆိုရင် ရိုးရိုးလေး တွေးကြည့်ရင် ကို ပြသနာရှိနေပြီလို့ မြင်တယ်။
အဲတော့ ထည့်ထားတဲ့ သူတွေ ကို ပြန်ထုတ် စေချင်သလို ။ ထပ်ထည့်မယ့် သူတွေကိုလဲ မထည့်စေချင်ဘူး။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူ က ဒီ % ပေးနေတဲ့ Industry ကို Monopolize လုပ်ပြီး လက်ဝါးကြီး အုပ်လာတာ။ သူပြို၇င် တော်တော်ထိကြမယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်တဲ့ သူတွေ အနေ နဲ့ အဲဒါကို ပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ်။
ကြားမှာ လူအာမခံ ပစ္စည်းအာမခံ
ပိုင်ဆိုင်မှုအာမခံ ယုံကြည်အပ်နှံစာချုပ်ကို သုံးပါတယ်။
အာမခံမရပါ။ ထောင် ၇နှစ်ထိကျခံရနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတခုကို အချိုးကျထည့်ဝင် လုပ်ကိုင်ပြီး
လုပ်ငန်းကအရှုံးပြရင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ငွေကြေးသာမက
အချိုးကျထည့်ဝင် လုပ်ကိုင်ပြီး အချိုးကျပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ အချိုးကျ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
ပေးရန်ကန့်သပ်ထားသောကုမ္မဏီ (Co.ltd) ဖြစ်ပြီး
ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပြီး မိမိပိုင်ဆိုင်မှုကို တရားစွဲခွင့်မရှိပါ။
ကုမ္မဏီကို အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်ရပါမယ်။ အများပိုင်ကုမ္မဏီသာလျှင်
ငွေတိုးလေး ပုံမှန်ရချင်လို့ဆိုရင် အာမခံတခုခုရယူထားပါ။
Ko Tun Oo
🔺Mone Thiri Zaw ဆွေးနွေးချက် 🔺
ဒီလို % အများကြီးပေးတယ်ဆိုထဲကပေါ့နော်
ကြာပါပီ !!! အစကတော့
၅ ခု ၆ ခုလုပ်တယ်ထားပါတော့
တစ်ရက် ၃ သိန်းစီဝင်ဦး ပါတော့
ထားပါတော့ (၃) သိန်းပဲ
လုပ်ငန်း ၆ ခုဆို တစ်လ ၅၄၀ ပဲ ရမယ်
ဒါတောင် အမြင့်ဆုံးအမောင့်တွက်လိုက်တာပါနော် !!!!
သူပေးရတဲ့ % နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်
% က ရငွေထက် ပိုများတာတွေ့ရလိမ့်မယ် !!!
အခု သူမရဲ့ group ထဲမှာ
လူပေါင်း ၃၈၀ လောက်ရှိတယ်
တော်တော်များ သိန်းဆယ် ရာချီ
အဖက်ဖက် ခိုင်လုံတဲ့ စာချုပ်
အရူံးအမြတ် ပြနိုင်လား ပေါ့
စဉ်းစားမိတာ Bank loan ယူလို့ရရဲ့သားနဲ့
အပြင်မှာ ဒီလိုလုပ်တာကို စဉ်းစားမိတယ် !!!
bank loan လောက်ကတော့
ညီမအမြင် လေးပဲဝင်ပြောကြည့်တာပါရှင့် !!!
🔺 Paing Min Khant ဆွေးနွေးချက် 🔺
မှန်​မမှန်​ သိချင်​ရင်​ ဒါမှမဟုတ်​ သက်​​သေပြချင်​ရင်​
CPA နဲ့ Audit ဝင်​ပြီး
စာရင်းချုပ်​ကို public တင်​လိုက်​ပါ။
🔺 Minn Thein Htun ဆွေးနွေးချက် 🔺
PA လုပ်ထားတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး
သူတို့သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဂျူးကလည်းမဖြေ
ဂျူးကိုမထိနဲ့ဆိုတဲ့ မမများကလည်း မဖြေ...
ဘယ် public post မှာဖြေချင်လည်း လာမေးပေးပါ့မယ့်
[ငွေထည့်ဝင်ထားသူတွေအတွက် အာမခံချက် ? ?
အဲ့ဒီလုပ်ငန်း တွေရဲ့ အစုစပ်ဝင်ထားသူတွေက လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ငွေဝင်ငွေထွက်စာရင်းတွေကို စစ်ခွင့်ရှိလား? ?]
🔺 ကိုဇင်ဇေ ဆွေးနွေးချက် 🔺
Jude Jude လုပ်ငန်းစု အကြောင်း
❗️Jude Jude လုပ်ငန်း စုနဲ့ ပတ်သက်လို့
၁။ ရှယ်ယာရှင်လိုလို / အစုစပ်လိုလို / ငွေချေးတာ လိုလို မသဲကွဲ ။
( ဝေဖန်တာတွေ များလာမှ အစုစပ်ဆိုပြီး
စကားပြောင်း သုံးလာတာ )
၂။ စဦးရင်းနှီးငွေ / လည်ပတ်ငွေ /
( တကယ် အစုစပ် / ရှယ်ယာရှင်တွေဆိုရင်
ဒါတွေ ပေးသိရမယ် ။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ပေးမသိဘူးလို့
သတင်း ရပါတယ် )
၃။ စာချုပ်စာတမ်း ခိုင်မာမှု အားနည်း ။
( လက်မှတ် ကြိုထိုးထားတဲ့ /
ရှေ့နေ ရှေ့ရပ် နဲ့ စနစ်တကျ ချုပ်ဆိုတာ မဟုတ်တဲ့
ပုံစံတွေနဲ့ ငွေ လက်ခံလေ့ရှိတာ သိရ ။ )
၄။ အတိုးနှုန်း သာမန်ထက် များလွန်း ။
( တစ်လကို ၂၀-၃၀% )
၅။ ရှယ်ယာ ခေါ်တဲ့ အကြိမ်ရေ စိတ်လွန်း ။
( ၁ နှစ်အတွင်း ၃ ကြိမ်လောက်ခေါ်ခဲ့ )
လုပ်ငန်း အမျိုးအစားမတူတာ တွေ
ချဲ့ထွင်တာ မြန်လွန်း ။
( တခြား လုပ်ငန်းရှင်တွေ
အောင်မြင်အောင်တောင် သေချာ လုပ်နေရတာ )
ရင်းနှီးငွေ ဘယ်လောက်ထိပဲ လက်ခံမယ်ဆိုတာ
ကြိုတင်သေချာမကြေငြာပဲ ငွေ လက်ခံခြင်း ။
( တကယ်တမ်းက ဘယ် ပမာဏ အထိပဲ
လက်ခံမယ်ဆိုတာ ရှိကို ရှိရမှာပါ ။ )
( အရေးအကြီးဆုံး အချက်က
သူ့လုပ်ငန်းတွေဟာ သိသိသာသာ ရေပန်းစားတာ / အောင်မြင်တာမျိုး မတွေ့ရဘူး ။ )
လူတွေက ကြားဝင် ဖြေရှင်းလွန်းတယ် ။
တခြား Group တွေမှာဆို
ဒီ Post ကတော့ AntiMLM group ထဲမှာမို့လို့ AntiMLM တွေရဲ့ စည်းလုံးအားကြောင့်
ကောင်းကောင်း ပြန် ထိမ်းနိုင်ခဲ့တယ် ။
နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးမှုများစွာ ရှိပြီးတဲ့
Post ပါ ဖျက်သွားတယ် ။
၇။ Public မှာ ဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားပဲ
ရုံးလာခဲ့ပါလား ဆိုတဲ့ MLM သမားတွေ ပုံစံချိုးတယ် ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ( ကိုဇင်ဇေ )
ကိုယ်တိုင် ရုံးလာခဲ့မယ် ။
Facebook Live video လွှင့်ပြီး
ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ဘူး ။
အပြင်က Professional Auditors တွေနဲ့ Audit ဝင်ခိုင်းပြီး မှန်ကန်ရင်
ရှယ်ယာ အမြောက်အများ ဝင်ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ကိုရဲမျိုးသန့် ရဲ့ စကားကိုလည်း
ဘာမှ ပြန်မဖြေရှင်းသွားဘူး ။
❗️ ❗️ ❗️အဆိုးဆုံးက ဝေဖန်မှုကို
အချက်အလက် တိတိကျကျ ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုး
တိုက်ခိုက်ဆဲဆို တာတွေ လုပ်တာပဲ ။
နောက်ဆုံး လူ ၆၀၀ လောက် ရှိတယ်ဆိုတဲ့
သူတို့ရဲ့ group ကနေ
Report ဝိုင်းထုဖို့ ကြိုးစားကြတယ် ။ ❗️ ❗️ ❗️
ကဲ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်တော့
ငွေ ထည့်သင့်မသင့် စဉ်းစားကြပေါ့ ဗျာ
Jude Jude / Zinzae